“मन्त्री, सांसद, कलाकार त पिउंछन भने मैले किन नखाने ?” रक्सीबारे नयाँ कुरा खुलासा गरे यी डाक्टरले – Everest Dainik – News from Nepal
“मन्त्री, सांसद, कलाकार त पिउंछन भने मैले किन नखाने ?” रक्सीबारे नयाँ कुरा खुलासा गरे यी डाक्टरले
मदिरा सेवन मानव सभ्यता सुरु भएदेखि नै हुँदै आएको छ । कतिपय समाजमा यसको प्रयोग धार्मिक र सामाजिक रूपले पनि मान्य छ । नेपालका केही समुदायमा कुखुराको भाले, कुखुराको फुल र मदिरा शुभकार्यमा अनिवार्य छ । विभिन्न धार्मिक शक्तिपीठमा मदिरा पनि चढाइन्छ र त्यहाँको जल या प्रसाद सम्पूर्ण हिन्दुहरूका लागि पवित्र मानिन्छ ।
त्यस्तै क्रिस्चियन धर्मको बाइबलका कथाहरूमा प्रभु इशुले पानीलाई मदिरामा परिणत गरी आफ्नो दैवीशक्ति र चमत्कार देखाएका वर्णनहरू छन् ।
यसरी धार्मिक र सामाजिक परम्परासँगै जोडिएर आएको हुनाले आजको समाजमा पनि विविध औपचारिक स्थान र समयमा यसको सेवनले ठाउँ पाएको छ । सायद यिनै ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक मान्यताले गर्दा नशालु पदार्थ हुँदाहुँदै पनि मदिराको प्रश्न जटिल र द्विविधायुक्त भई अझै यसको उपभोगले वैधानिक छुट पाएको छ ।
हिजोआज बिरामीसँग मदिराबारे चर्चा गर्दा एउटा नयाँ तर्क पनि सुन्न पाइन्छ । थोरै मात्रामा अड्कलेर पिउने गरे यसले मुटुका रोगीहरूलाई फाइदा गर्छ रे ! रोग लागिसकेकालाई त फाइदा गर्छ भने झन् रोग नै नलागेका निरोगीले पनि थोरै–थोरै सधंै पिउने गरे मुटुको रोग नै लाग्दैन होला !
तर यस तर्कभित्र खतरनाक कुतर्क लुुकेको छ । जब कुनै वस्तुको लाभको चर्चा गरिन्छ, त्यसबाट हुने प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष हानि र त्यसले उत्पन्न गर्ने खतरासँग जोड–घटाउ गरेर मात्र शुद्ध लाभको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।
मदिरा सेवनबारे जनमानसमा केही भ्रम छन् । रक्सी पिएका बेला मन आँटिलो भएको, फुर्ती आएको र गाह्रो काम गर्न जोश–हिम्मत बढेको अनुभव हुन्छ आदि ।
रक्सीले मानिसको मस्तिष्कलाई धुमिल्याइदिने, सतर्कता, होशियारी र खतराको महसुसलाई कमजोर पारिदिने हुनाले आफू आँटिलो भएको अनुभव हुन्छ । खाल्टै–खाल्टा भएको जमिनमा हिंँड्दा खाल्टामा परिन्छ कि भनेर हामी सतर्क हुन्छौं, तर वर्षापछि छिपछिपे पानीले त्यही जमिन ढाक्यो भने खाल्टाहरू देखिँंदैनन्, सबै समतल देखिन्छ ।
त्यस्तो अवस्थामा आँटिलो भएर हिँड्दैमा खाल्टामा परिने खतराबाट बचिँदैन र पानीले भरिएको जमिन देखावटी रूपमा मात्र समतल देखिन्छ । त्यस्तै मदिरा सेवन गरेका बेला आउने आँट, जोश पनि देखावटी मात्रै हो र यसले झन् ठूलो खतरा निम्त्याउन सक्छ ।
अर्को एउटा प्रचलित गलत धारणा रक्सीले यौनशक्ति बढाउँछ भन्ने छ । मदिरा सेवनले यौनशक्ति झन् कमजोर बनाउँछ । वास्तवमै जवान स्वस्थ व्यक्तिको शक्ति कमजोर भएको छ भने त्यसका मुख्य कारण हुन सक्छन्– मानसिक तनाव, मधुमेह र मदिराको दुव्र्यसन ।
आफू कमजोर भएको कारणले नै जँड्याहाहरूले आफ्नी पत्नीलाई ‘मबाट नपाएको सन्तुष्टि अरूसँग लागेर लिने गरेकी हुनुपर्छ’ भन्ने शंकाबाट प्रेरित भई पिछा गर्ने र पिट्ने गर्छन् ।
मदिराले गर्ने आर्थिक, सामाजिक, व्यावसायिक, नैतिकजस्ता बृहत् क्षेत्रका हानिका अतिरिक्त व्यक्तिविशेषमा पार्ने प्रत्यक्ष प्रतिकूल असरहरू भयावह नै हुन्छन् । समग्रमा भन्नुपर्दा रक्सीले व्यक्तिको शरीर र मन दुवैलाई नष्ट पार्दै लैजान्छ । रक्सीले सबभन्दा बढी क्षय पुर्‍याउने अंग कलेजो हो । मदिरा दुव्र्यसनीको कलेजो फुलेको हुन्छ र यसको भित्री बनावट खल्बलिएको हुन्छ ।
कलेजोले काम गर्न छोडेपछि विविध समस्यासहित पेटमा पानी जम्मा हुन्छ (जलग्रह) र खोक्दा रगत बान्ता हुन्छ । शारीरिक असरभन्दा पनि मानसिक असर झन् डरलाग्दो हुन्छ । शारीरिक विनाश अलिपछि र विस्तारै बढ्दै जान्छ भने मानसिक क्षय दुव्र्यसनको पहिलो चरणबाटै सुरु हुन्छ ।
रक्सीको दुव्र्यसनी काँतर, असभ्य, नकच्चरो बन्छ । रक्सीको दुव्र्यसनी भइसकेपछि त्यस्ता व्यक्तिको न बोलीको विश्वास हुन्छ, न कामको जिम्मेवारी । क्रमश: व्यक्ति सामाजिक, वैचारिक, नैतिक रूपले गिर्दै जान्छ । दुव्र्यसन अत्यधिक गम्भीर हुनथालेपछि मानसिक रोग सुरु हुन्छ । पिउने बानी विस्तारै पर्दै जाँदा बढी आनन्दित हुन मात्रा बढाउँदै रक्सी नभई नहुने, नशा लाग्न मदिराको मात्रा थप्दै जानुपर्ने, रक्सी खान बन्द गर्दा अप्रिय, पीडादायक नयाँ रोग देखापर्छ ।
सुरुको अवस्थामा निद्रा नलाग्ने, टाउको दुख्ने, हात काँप्ने, पसिना आउने, चिड्चिडाहट मात्र हुनसक्छ भने दुव्र्यसन गम्भीर भएको अवस्थामा पागलजस्तो हुने, नभएका कुरा देख्ने र सुन्ने, उत्तेजित र आक्रामक हुने, बरबराउने, छारे रोगजस्तै मुच्र्छा पर्ने हुन्छ ।
रक्सी धेरै पिएर दुव्र्यसनी बनेपछि यसैबाट मानसिक रोग– साइकोसिस हुनसक्छ, तर मानसिक रोगबाट पीडित भएपछि पनि व्यक्ति मदिराको शरणमा पुग्छ ।
मानसिक रोग भनेको मनको पीडा, चिन्ता, पीर, डर, शंका आदिले भरिएको मन हो । यस्तो अवस्थामा पिएर मन भुलाउने इच्छा लाग्छ । विशेषगरी डिप्रेसन र न्युरोसिसका बिरामीहरू यो कुलतमा फँस्ने डर बढी हुन्छ । मदिराको कुलत थपिएपछि मानसिक रोग जटिल बन्छ, मदिरा दुव्र्यसन अटुट हुन्छ । साइकोसिस (विक्षिप्त अवस्था) मा रक्सी पिएपछि बिरामी झन् आक्रामक उत्तेजित र असहिष्णु बन्छ ।
न्युरोसिसमा रक्सीको नशाले डर, बेचैनी केही छिन हल्का भए पनि रोग झन् गहिरिँदै जान्छ । छारे रोगमा रक्सी पिउन थालेपछि रोग कहिल्यै निको हुँदैन र स्वभावमा विकृति देखिन थाल्छन् ।
मानिस किन मदिरा दुव्र्यसनी बन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन सजिलो छैन । मानसिक रोग र मदिराको सम्बन्ध यतिमा अन्त्य हुँदैन । मदिरा सेवन गर्ने मानसिक रोगीहरूलाई उपचार गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ र निको पार्न झन्डै असम्भव भइदिन्छ ।
मदिराको वास्तविक खतरा र यसभित्र लुकेको मोहनी भ्रमलाई मनन गरेर होशियारीसाथ मात्र यसको सीमित संगत गर्नुपर्छ ।